ခြေချောင်းမှိုမှ 16 အိမ်မှာကုစား - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် နှိပ်ပါ ပြင်းထန်သောအားကစား ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုန်ပစ္စည်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ခြေချောင်းမှိုမှ 16 အိမ်မှာကုစား
အန္တရာယ်အချက်များ | ရောဂါရှာဖွေရေး | နေအိမ်ကုစား | ဆေးဝါးများ | ဆေးညွှန်းပါသောဆေးများ | ဘယ်အချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့မယ်
Onychomycosis သို့မဟုတ် tinea unguium ဟုလည်းလူသိများသော Toenail မှိုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူသန်းပေါင်းများစွာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအသုံးအဆောင်လက်သည်းဖြစ်သည်။ မှို၊ ရောဂါနှင့်မှိုများကဲ့သို့သောသက်ရှိအမျိုးမျိုးမှိုမှိုလက်သည်းတွင်ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်သည်။ အဖွင့်အဖွင့်သည်ဤသက်ရှိများအတွက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဝင်ပေါက်တစ်ခုပေးသောကြောင့်ဤသက်ရှိများသည်လက်သည်းများပတ်ပတ်လည်အက်များနှင့်လက်သည်းများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
သင်၏ခြေထောက်များသည်ချွေးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုစွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုစွတ်ခြင်းတို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ခြေချောင်းများတွင်မှိုကြီးထွားရန်အခွင့်အလမ်းတိုးလာသည်။ မကြာခဏပူနွေးစိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့သို့သောရေကူးကန်များ၊ အ ၀ တ်ခန်းခန်းများသို့မဟုတ်စိုထိုင်းသောရာသီဥတုတွင်နေထိုင်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောကူးစက်ရောဂါအမျိုးအစားများကိုဖော်ထုတ်ရန်အန္တရာယ်ပိုများနိုင်သည်။ ဤသည်ကြောင့်လည်းဤရောဂါကူးစက်မှုနွေရာသီလအတွင်းပိုမိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ပုံရသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားများသည်ဤရောဂါအမျိုးအစားများကိုအမျိုးသမီးများသာမကအားနည်းသောကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များဖြစ်သောဆီးချို၊ သွေးလည်ပတ်မှုနည်းပါးသောလူကြီးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများထက်ပိုမိုတီထွင်ရန်လူသိများသည်။ လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်များကိုမကြာခဏပြုလုပ်သောသူများသည်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုသူတို့ခြေဖဝါးသို့ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ လက်သည်းခွံကူးစက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားတွင်အဖြူ၊ အဝါရောင်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ပင်ဖြစ်သည့်လက်သည်းအရောင်ပြောင်းလဲမှုပါ ၀ င်သည်။ လက်သည်းခွံထူလာပြီးလက်သည်းကိုဂရုစိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။ လက်သည်းခွံနှင့်လက်သည်းခွံလုံးလုံးကွဲခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ခြေသည်းမှိုမှိုကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ခြေထောက်ကို ဦး စွာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကဓာတ်ခွဲခန်းမှာနောက်ထပ်အကဲဖြတ်ရန်လက်သည်းသို့မဟုတ်အရေပြားနမူနာများကိုယူဆောင်နိုင်သောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ လက်သည်းပြောင်းလဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ (psoriasis, microtrauma, အာဟာရချို့တဲ့မှု၊ လက်သည်းဆိုးဆေးမှအစွန်းအထင်းများ) ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်လျော်သောကုသမှုကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုး ခြေချောင်းမှိုများအတွက်ကုသမှုရွေးချယ်စရာ မူးယစ်ကင်းစင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများ၊ ဆေးညွန်းမပါသောဆေးဝါးများ၊ ဆေးညွန်းဆေးများ၊ လေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုသို့မဟုတ်ထိုပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည်ဆေးဝါးများမဝယ်ယူမီသို့မဟုတ်သူတို့၏ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသို့မသွားခင်အိမ်တွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းများနှင့်စတင်ကြသည်။ ဤကုသမှုများသည်ပျော့ပျောင်းသောရောဂါများတွင်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာသူတို့ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ချုံ့ခြင်းနှင့်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကုသမှုခံယူရန်သင်၏လက်သည်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။ ခြေသည်းလက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လက်သည်းအပေါ်ဖိအားလျော့နည်းစေသည်။ လက်သည်းတိုတိုနှင့်ပါးလွှာနေစေရန်ရိုးရာလက်သည်းညှပ်နှင့် Emory ဘုတ်ကိုသုံးပါ။ အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီပြီးနောက်အသုံးအဆောင်များပိုးသန့်ဆေးသေချာပါစေ။ ချုံ့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောလက်သည်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ခြေသည်းမှိုမှိုကုသရာတွင်အနာရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သင်၏ခြေအိတ်နှင့်ဖိနပ်ကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မလိုလားအပ်သောခြေမှိုကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဖိနပ်နှင့်အားကစားဖိနပ်နှစ်မျိုးလုံးသည်ထည်ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာနိုင်သောတဆေးနှင့်မှိုတို့၏ကြီးထွားမှုကိုဖယ်ရှားရန်ရေပူတွင်ဆေးကြောနိုင်သည်။ ဖိနပ်အချို့သည်စက်ခြောက်နိုင်သည်။ ဖိနပ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင်နေပူတွင်ဖိနပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စက်ဖြင့်လျှော်။ မရသည့်ဖိနပ်များနှင့်အခြားဖိနပ်များကိုရှလကာရည်နှင့်ရေဖြည့်တင်း။ သုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝေးမှတန်ပြန်သည့်ဖန်းဂတ်စ်ဖြန်းဆေးဖြင့်ဖျန်းနိုင်သည်။ ဆေးဝါးမှုန့်များသည်ခြေဖဝါးမှိုအတွက်ဖိနပ်များကုသရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖိနပ်နှင့်ခြေအိတ်များကိုချွတ်ခြင်းအားဖြင့်ခြေများကိုရှူရှိုက်မိခြင်းမှိုကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အသက်ရှူနိုင်သောဖိနပ်နှင့်သန့်ရှင်းသောခြေအိတ်များဝတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ခြေကိုကာကွယ်ပါ။ ၀ ါး၊ ကြေးနီသို့မဟုတ်အထူးအထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်သည့်ခြေအိတ်များနှင့်ဖိနပ်များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကမလိုလားအပ်သောဘက်တီးရီးယားနှင့်တဆေးကိုသင်၏ဖိနပ်တွင်မကြီးထွားစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ခြေထောက်ကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စေရန်တက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုကခြေချောင်းမှိုမှိုပြန့်ပွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ နေ့စဉ်သုံးအိမ်အသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ခြေထောက်ကိုနွေးထွေးသောရေနှင့်ရေချိုးနိုင်သောခြေနှင့်ရေချိုးနိုင်သည်။ ခြေထောက်များကိုသဘာဝအလျောက် homeopathic ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းသည်ခြေချောင်းမှိုမှိုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အတွက်အကျိုးရှိသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ခြေချောင်းများတွင်ပေါက်သောမှိုကိုသတ်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုရောဂါကူးစက်ခံရသည့်ခြေချောင်းများသို့မဟုတ်ခြေချောင်းများပေါ်တွင်သန့်ရှင်းသောအထည်သို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းဖြင့်သုတ်နိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကိုလည်းခြေထောက်တစ်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ ရေအေး (၄) ခွက်နှင့် hydrogen ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (သို့မဟုတ်အများအပြားပါ ၀ င်သော) ခွက်များကိုရောစပ်။ ၁၀ မိနစ်မှမိနစ် ၂၀ ကြာအောင်စိမ်ပါ။ ခြေထောက်များကိုပူနွေးသောရေနှင့်ဆေးပြီးခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွင်ခြေဆေးခြင်းသည်ခြေချောင်းသို့မဟုတ်ခြေမှိုမှိုများကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ လက်ဖက်ခြောက်အနက်ရောင်တွင် tannic acid ပါဝင်ပြီးခြေထောက်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေခြင်းနှင့်ချွေးထွက်ခြင်းများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ခြေထောက်တို့၏ပေါက်များကိုပိတ်နိုင်စေသည်။ ရေနှစ်ပုံပြုတ်ကိုလက်ဖက်ရည်အိတ် ၅ မှ ၆ ခုထည့်ပါ။ လက်ဖက်ရည်ကိုအအေးခံ။ မိနစ် ၃၀ ကြာစိမ်ထားပါ။ ဒီခြေထောက်ကိုနေ့စဉ်သုံးပါ။
5. Apple cider ရှလကာရည်
ခြေသည်းမှိုမှိုကိုကုသရန်အိမ်တွင်းဆေးတစ်လက်မှာပန်းသီး cider ရှလကာရည်ပါဝင်သည်။ ရှလကာရည်သည်ခြေဖဝါးကိုစိုစွတ်စေရန်ရေနှင့်ရောနှောနိုင်သည်။ ၎င်းသည် acetic acid ပါဝင်မှုသည်အရောင်ပြောင်းထားသောခြေချောင်းများကိုဖြူဖွတ်စေရန်နှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုအခြားခြေချောင်းများသို့မရောက်ရှိစေရန်ကူညီသည်။ ပူပြင်းသည့်ရေတစ်ခွက်တွင်ရှလကာရည်နှစ်မျိုးသုံးပါ။ နေ့စဉ်မိနစ် ၂၀ ကြာအောင်စိမ်ပါ။ ခြေထောက်များကိုစုပ်ယူရန်အတွက်မူအချိုးသည်ရှာလကာရည်တစ်ပိုင်းနှင့်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနံ့များလွန်းနေပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှထိရောက်သောကြောင့်အဖြူရောင်ရှလကာရည်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်လက်သည်းကိုအနာပျောက်စေရန်ခြေဖဝါးတွင်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါထည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းအနည်းငယ်မျှသာရေနှင့်အတူမုန့်ညက်ဆိုဒါတစ် ဦး ငါးပိစေနှင့်ခြေလျင်ကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ငါးပိကိုဘေးဒဏ်သင့်ဒေသ၌ ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်ထိုင်ပြီးရေပူဖြင့်ဆေးပြီးခြေထောက်ကိုခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပေးပါ။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါများကိုလည်းခြေထောက်ပေါ်သို့မဟုတ်ခြေထောက်အမှုန့်ကဲ့သို့ဖိနပ်တွင်ဖြန်းနိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ခြေလျင်လျှောက်ထား, သန့်ရှင်းသောခြေအိတ်ပေါ်တွင်တင်; ပေါင်မုန့်ဖုတ်သောဆိုဒါသည်ကုစားနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများသည်ခြေချောင်းမှိုမှိုကိုလျှော့ချရန်အလုပ်လုပ်စဉ်အစိုဓာတ်ကိုပျောက်စေနိုင်သည်။
7. Epsom ဆား
တစ် ဦး အတွက်ခြေစိမ် Epsom ဆား (မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလဖိတ်) ရေချိုးခြင်းသည်သင်၏ခြေမှိုကိုသက်သာစေရန်အကျိုးရှိသည်။ သင်သည် Epsom ဆားခွက်တစ်ခွက်ကိုပူနွေးသောရေပူသို့နှစ်ဆနှင့်ရော ၁၀ မိနစ်မှမိနစ် ၂၀ အထိရေစိုနိုင်သည်။ Epsom ဆားပါဝင်သော ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျသောဆားပါဝင်နိုင်သည်။
½ခွက်ဖလား Epsom ဆား
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးရောမွှေပါနှင့် 15 မှ 20 မိနစ်ခြေစုပ်ယူ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများခြေထောက်ရေချိုးဖို့ကြီးစွာသောထို့အပြင်ဖြစ်ကြသည်။ ခြေထောက်မှိုကိုကုသရန်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်၏ခြေဖဝါးကိုစုပ်ပြီးနောက်ခြေထောက်များကိုသန့်ရှင်းသောရေနှင့်ဆေးပါ။ သန့်ရှင်းသောခြေထောက်များကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန်၊ သင်၏ခြေဖဝါးရေချိုးပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောခြေအိတ်များနှင့်အသက်ရှူနိုင်သောဖိနပ်များကိုဝတ်ဆင်ပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်ဘုံရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကုသရန် homeopathic ကုသမှုတွင်လူကြိုက်များလာသည်။ များစွာသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်သဘာဝပantibိဇီဝဆေးနှင့် antifungal ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ခြေသည်းမှိုမှိုကိုလျှော့ချနိုင်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများတွင် -
ရိုင်း oregano ရေနံ
အသားအရေကိုအသုံးမပြုမီအုန်းရေနံသို့မဟုတ်သံလွင်ဆီကဲ့သို့သောအရေးပါသောအဆီများကိုသယ်ဆောင်ပါ။ လိုချင်သောဆီ (သို့) ဆီပေါင်းစပ်မှုအားသင်ရွေးချယ်သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်ရောထွေးပါ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သငျသညျခြေလျင်ရေချိုးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှစ်ခုမှသုံးခုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောသံလွင်နှင့်နေကြာဆီကဲ့သို့အိုဇုနျးအဆီများ, အိုဇုနျးဓာတ်ငွေ့ဆံ့။ အယူအဆမှာအိုဇုန်းလွှာသည်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများသို့အောက်ဆီဂျင်ကိုသယ်ဆောင်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေပြီးအရေပြားဆဲလ်များကိုလျင်မြန်စွာကုသရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု ozonated oil သည် toenail မှိုအတွက်ထိရောက်သောအိမ်တွင်းဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများက oozonized နေကြာဆီကိုတဆေး ၁၀၁ ခုဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဖန်းဂတ်စ်မှိုများကိုကာကွယ်ရာတွင်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်သည်။ ဤကုထုံးကိုကြိုးစားရန်သင့်ခြေကို ဦး စွာဆေးကြော။ အခြောက်လှန်းပါ။ အရေပြားထဲသို့အိုဇုန်းတီးထားသောအဆီအနည်းငယ်ကိုညင်ညင်သာသာ နှိပ်၍ ဘေးဒဏ်သင့်သည့်လက်သည်းများနှင့်ခြေချောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုနှိပ်ပေးပါ။
သံလွင်အရွက်ထုတ်ယူမှုတွင်သဘာဝ antifungal နှင့် antimicrobial ဖြစ်သော oleuropein ပါရှိသည်။ ကူးစက်မှုကိုလျှော့ချရန်သံလွင်ရွက်မှပြုလုပ်သောဆားတစ်ချောင်းကိုခြေချောင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခြေသည်းမှိုမှိုစနစ်တကျပြုမူရန်ထုတ်ယူမှုပါဝင်သောဆေးတောင့်များကိုလည်းသင်မျိုချနိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သံလွင်ရွက်ထုတ်ယူဆေးတောင့် ၂ ခုအားတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ကြာရှည်သောက်နိုင်သည်။ သံလွင်ရွက်ထုတ်ယူမှုမပြုမီသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
11. Snakeroot ထုတ်ယူ
နေကြာကြာမိသားစုမှအပင်များမှပြုလုပ်သော Snakeroot ထုတ်ယူမှုသည်သဘာ ၀ မှိုမှိုတိုက်ဖျက်သည့် homeopathic ကုသမှုဖြစ်ပြီးခြေချောင်းမှိုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Ayurvedic အလေ့အကျင့်များတွင်အများအားဖြင့် snakeroot ထုတ်ယူမှုကိုသက်ရောက်မှုရှိသည့်ခြေချောင်းသို့တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်လမှနှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိထုတ်ယူသုံးစွဲပါ။ သင်၏ခြေမှိုအမျိုးအစားအတွက် snakeroot ထုတ်ယူမှုမှန်ကန်မှုရှိမရှိသင့်ဆရာဝန်အားမေးပါ။
သွပ်အောက်ဆိုဒ်သည်မှိုကူးစက်မှုကိုကုသပေးနိုင်သောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ အရေပြားကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် miconazole-zinc oxide သည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ခြေထောက်မှိုလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဘေးသင့်ဒေသသို့ပက်ဖြန်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ခြေထောက်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွင်သွပ်ထည့်ခြင်းသည်သင့်တော်မှုရှိမရှိသိရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ။
ကြက်သွန်ဖြူက အစွမ်းထက်မွှားစက်ရုံ ။ လိမ်းကျံသောကုသမှုအတွက်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်ကိုခုတ်ပြီးဘေးဒဏ်သင့်သောလက်သည်းများပေါ်တွင်မိနစ် ၃၀ ထားပါ။ ၎င်းသည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာမီးလောင်လွယ်သောကြောင့်ကြက်သွန်ဖြူအနည်းငယ်သုံးပါ။
ဆေးဖက်ဝင်ဆရာဝန်တစ် ဦး အားကြက်သွန်ဖြူပါ ၀ င်သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပါ။ ဤဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအရေပြားရောဂါများကိုကုသရန်သာမကသွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါအချို့ကိုကာကွယ်ရန်၊ အစာအိမ်အနာ, အစာခြေပြproblemsနာများသို့မဟုတ်သွေးထွက်ရောဂါနှင့်အတူလူများကကြက်သွန်ဖြူဖြည့်စွက်မသောက်သင့်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများကိုထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်သည်။ ပါးစပ်ကြက်သွန်ဖြူဖြည့်စွက်မသောက်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်ပြောဆိုပါ။
ပြောင်းဖူးအစာသည် antifungal properties အချို့ရှိသည်။ သင်သည်ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုငါးပိသို့မဟုတ်စုပ်ယူရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ငါးပိစားရန်အတွက်ပြောင်းဖူးမုန့်ကိုရေတိမ်ပိုင်းထဲတွင်နွေးသောရေတွင်ပျော်အောင်ထားပါ။ သင်၏ခြေထောက်ပေါ်မသုံးမီငါးပိကိုအေးအောင်ထားပါ။ တစ်နာရီကြာထိုင်ပါစေ တစ်စုပ်အဖြစ်, ရေတိမ်ပိုင်းကွန်တိန်နာမှတစ်လက်မ cornmeal ထည့်ပါ။ ပြောင်းဖူးနှင့်ထိပ်ဖူးပေါ်တွင်တစ်လက်မပူနွေးသောရေကိုသွန်းလောင်းကာပြောင်းဖူးနှင့်ရေကိုသဘာဝအလျောက်တစ်နာရီခန့်ထားနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ရန်နှင့်တစ်နာရီလောက်စိမ်ပါစေရေနွေးနွေးကိုလုံလောက်စွာထည့်ပါ။ သငျသညျ toenail မှိုများအတွက်အပတ်စဉ်အိမ်မှာဆေးတစ်လက်အဖြစ်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လက်ရှိအစားအစာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မှိုကိုအစာကျွေးနေတယ် Candida ကြီးထွားလာသည်။ တဆေးကိုငတ်မွတ်စေပြီးခြေသည်းမှိုမှိုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အချို့သောအစားအစာပြောင်းလဲမှုများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ သွေးသည်ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစီးဆင်းသွားသောအခါ၎င်းသည်သဘာဝဗီတာမင်များနှင့်အဆိပ်များကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ လေ့ကျင့်ပါ သင့်လျော်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ခြေချောင်းမှိုပိုဆိုးအောင်ရှောင်ရှားရန်။ အစိုဓာတ်ပိုလျှံခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည့်၊ ဖန်းဂတ်စ်မှိုအမှုန့်များ သုံး၍ ခြေထောက်ရှူရှိုက်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးသောအခါဖိနပ်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ရေချိုးခန်းခန်းများသို့မဟုတ်ရေကူးကန်များတွင်ခြေညှပ်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်များဝတ်ဆင်သည့်ခြေအိတ်များကိုဝတ်ဆင်ပါ။ သင်၏ခြေကိုဘက်တီးရီးယားဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောပြီးရေချိုးပြီးနောက်သင်၏ခြေကိုလုံးဝခြောက်သွေ့ရန်သတိရပါ။
အိမ်တွင်းကုသမှုများသည်ခြေသည်းလက်သည်းမှိုကိုကုသရန်သင်ရှာဖွေနေသည့်ကုသမှုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) မှအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်မှိုမှိုများ၊ ရေမှုန်ရေမွှားများနှင့်ဆေးဝါးလက်သည်းဆိုးဆေးများကိုပင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အိမ်သုံးဆေးများသည်ဤထုတ်ကုန်များ၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
toenail မှိုကိုကုသရန်လူကြိုက်များသော over-the-counter ကုထုံးတစ်ခုမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် Vicks VapoRub ။ Mentholated salves သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သော menthol၊ ယူကလစ်ပင်အဆီနှင့် camphor များပါ ၀ င်သည်။ Vicks တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အခြားကုသမှုများနှင့်ဆေးဝါးများနှင့်တွဲသုံးပါ။ နေ့စဉ်ခြေထောက်များကိုသန့်ရှင်းပြီး Vicks VapoRub အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုပါ။
OTC ထုတ်ကုန်တွင်ရောဂါပိုးဝင်သောလက်သည်းကိုစုပ်ယူခြင်း Listerine ခြေသည်းမှိုမှိုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ကူညီနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ပါးစပ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Listerine တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်မိနစ် ၂၀ ကြာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောခြေချောင်းသို့မဟုတ်ခြေချောင်းတွင် Onychomycosis လက္ခဏာများကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။
အားကစားသမား၏ခြေထောက်မှုန်ရေမွှားများ၊ အမှုန့်များနှင့်လိမ်းဆေးများသည်ခြေချောင်းသို့မဟုတ်ပတျဝနျးကငျြအသားကိုမပျေါမှီဖန်းဂတ်စ်ကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သင်ဆေးညွှန်းမပါဘဲ ၀ ယ်နိုင်သည် နာတာရှည် , မိုက်ကတီတေး , Lamisil ရေမှုန်ရေမွှား နှင့် Lotrimin AF ။ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သည့်သင်၏ဒေသခံဆေးဆိုင်ရှိဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်လအနည်းငယ်အတွင်းသဘာ ၀ ကုထုံးများသို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းမပါဘဲဆေးကုသမှုများပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသောခြေချောင်းရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဆေးညွှန်း - အစွမ်းထက် antifungal ဆေးသည်ခေါင်းမာသော Onychomycosis ကိုပပျောက်စေနိုင်သည်။
ခေါင်းကိုက်သောဆေးများသည်အသင့်အတင့်မှအလယ်အလတ်ရှိသောခြေသည်းမှိုရောဂါကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ လိမ်းဆေးများတွင်လက်သည်းဆိုးဆေးသို့မဟုတ်အရည်ဆေးများပါဝင်သည်။ Loprox (ciclopirox) Penlac (ciclopirox) Kerydin (tavaborole) နှင့် ဂျူဘီးယား (efinaconazole) သည်ခြေချောင်းမှိုမှိုများအတွက်ဆေးညွှန်းတွင်အများဆုံးဆေးဖြစ်သည်။
ပါးစပ်ဆေးများသည်ဆေးတောင့်များ၊ တချို့ကဘုံဆေးညွှန်းဖြစ်ကြသည် Diflucan (fluconazole), Lamisil ( ရေတံခွန် ), Onmel (itraconazole) နှင့် Sporanox (itraconazole) ။
homeopathic ဆေးကိုသုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာအနက်တစ်ခုမှာဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ခြေသည်းလက်သည်းမှိုကိုကုသရန်အတွက်မကြာခဏသတ်မှတ်ထားသောလိမ်းဆေးများသည်အရေပြားကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ Onychomycosis ကိုကုသရန်ခံတွင်းဆေးများသည်အသည်းသို့မဟုတ်အူလမ်းကြောင်းအရပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသင့်ဆေး၏စာရင်းကိုသေချာဖတ်ပါ။ ဆေးညွှန်း၏ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်ပါကသင်၏ဆေးဝါး၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အထူးကုနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
သငျသညျမြဲလက်သည်းမှိုမှိုသို့မဟုတ်နာကျင်မှုpreżentiကြုံနေရလျှင်, သင်အထူးကုတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အထူးကုဆရာဝန်သည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်ပြီး Onychomycosis ကိုဖြစ်စေသောမှိုနှင့်တဆေးအမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့သက်ရောက်မှုရှိသည့်ခြေချောင်းသို့မဟုတ်အသားသေးငယ်သည့်နမူနာကိုပို့လွှတ်နိုင်သည်။ သင်၏ခြေမှို၏အကြောင်းရင်းကိုသိထားခြင်းကသင်၏အခြေအနေကိုကုသရန်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
လက်သည်းပြောင်းလဲခြင်းသည်နောက်ခံအခြေအနေများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည် psoriasis နှင့် ဆီးချိုရောဂါ သင်၏အခြေအနေဆက်လက်ဆိုးရွားလာလျှင်သို့မဟုတ်ဆိုးရွားလာပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးကုသမှုခံယူရန်အရေးကြီးသည်။ ဆီးချိုရောဂါလူနာများတွင်အရေပြားကိုဘက်တီးရီးယားနှင့်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်မကြာခဏဆေးရုံတက်ရပြီးပြင်းထန်သောရောဂါများတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုမိုမြင့်မားပါကအိမ်တွင်းဆေးများကိုကျော်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ advil နဲ့ tylenol ကိုငါရနိုင်သလား